22/10/2018 | La dépêche de MadagascarLa dépêche de Madagascar
FANAFIHANA TANY ANKADIKELY ILAFY : VAZAHA FILOHA TALE JENERALINA ORINASA AFAKABA MATY VOATIFITRA
Tranona teratany vahiny eny Ankadikely Ilafy no norobaina jiolahy nitam-piadiana, ny maraimben’ny sabotsy teo. Maty ny tompon-trano ary nanjavona ny vola sy ireo fitaovana maro. Raim-pianakaviana, teratany vahiny 51 taona, filoha tale jeneralina orinasa afakaba no lasibatry ny vono sy ny fanafihana teny Ankadikely Ilafy, ny sabotsy teo, tamin’ny 1 ora maraina. Maty tsy tra-drano…
KAOMININ’I CARION : KILA TAO ANATIN’ILAY KAMIAO ILAY MPAMILY 25 TAONA
Niredareda ny afo teny amin’ny kaominin’i Carion, distrikan’i Manjakandriana, ny tolakandron’ny sabotsy teo. Tovolahy 25 taona no may kila tao anatin’ny kamiao izay nentiny hizotra any Antananarivo. Nitongilana ilay fiara talohan’ny nirehetany. “Akora fitsifotra amin’ny helika no nameno io fiarabe io. Io tovolahy io no namily izany ka tratra farany tao anaty kamiao izy”, raha…
SAMBAVA : ANKIZILAHY 17 TAONA NAMONO NAHAFATY NY NAMANY
Fifamaliana momba ny fahateren’ny toerana natoriana no anton’ny famonoana. Izany no valintenin’ilay ankizilahy 17 taona, izay voatondro ho namono nahafaty ny namany izay mitovy taona taminy, tany Amparihy, fokontany iray any amin’ny distrikan’i Sambava. Fantatra fa niaraka nitady asa izy roalahy ireto ary tsy tafody an-trano, ka nisy olona nanaiky nampiantrano azy ireo. Nanomboka anefa…